Ndezvipi Shower Chairs Kune Vakwegura? | KarmanHealthcare.com
Mabasa akareruka ezuva nezuva anova akaoma sezvo isu tinokwegura, kunyanya kana majoini nemapfupa edu atanga kuumbika. Izvi ndezvechokwadi kana iri nguva yekugeza kana yekugezera. Imba yekugezera ndiyo imba ine njodzi kune avo vakwegura kana ndonda nekuti ndipo panowanzoitika tsaona dzinotsvedza kana dzinokanganisa. Asi, a chair yekugeza inogona kubvisa akawanda ekunetseka pamusoro pekukuvara netsaona uri muchimbuzi.
Shower chair anogadzirwa kubva mupurasitiki nealuminium uye anogona kuiswa kana kuiswa munzvimbo yekugezera kana bhavhu kuti ape mushandisi nzvimbo yakachengetedzeka yekugara paanenge achigeza. Havafanirwe kumira vachigeza izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vanhu vanorwara nearthritis, musana wakashata kana vachembera vasingagone kufamba. Ivo vanouya mune akati wandei masitaera uye unogona kuwana nyore imwe inokodzera bhavhu rako kana shawa.
Shower chair akareruka uye akasimba kwazvo uye akasimba, izvo zvinopa mushandisi sarudzo yekuzvifambisa kana zvichidikanwa. Vamwe vanouya nemavhiri zvichiita kuti zvive nyore kuti vatarisiri vafambe kana zvichidikanwa.
Mabhureki pamakumbo anodzivirira chigaro kubva pakuumburuka pachinoshandiswa. Dzese dzakasimba makumbo esimbi uye mazhinji ane masimba epamusoro epurasitiki zvigaro. Mimwe mienzaniso ine zvekunze zvinhu senge teak uye bamboo.
Kune shawa chinja cheya icho chakanyanya kukodzera kune vanhu vanoziviswa. Aya marudzi emacheya ane zvigaro zvakareba uye akafanana muchimiro kubhenji. Chigaro chakaiswa pamusoro pebhabhu negumbo rimwe mukati mebhati uye rimwe riri kunze.
Kana mushandisi achida kushandisa shawa, ivo vanongoda kugara pamucheto vasati vaendeswa kune yechitima system mukati kana ivo vanogona kuzvitsvedza zvishoma nezvishoma pamusoro, sekunge pabhenji repaki. Aya marudzi ezvigaro akakura uye anoshandisa yakawanda nzvimbo, nekudaro, iwe unofanirwa kufunga nezve saizi yeimba yako yekugezera usati waenda kune iyi sarudzo.
Shower chair akanaka kune chero chero mhando yekugezera, saka unogona kuenda navo pazororo kana kunyangwe kana uchienda kumusha mutsva.